Hiaraka isika – Jly Camille Vital : “Aleo hahitsin’ny mpitondra manaraka eo ny lalàmpanorenana” | NewsMada
Hiaraka isika – Jly Camille Vital : “Aleo hahitsin’ny mpitondra manaraka eo ny lalàmpanorenana”
Par Taratra sur 23/09/2017
Nivoaka amin’ny fanginany. Nanao fanambarana ny fikambanana Hiaraka isika tarihin’ny Jly Camille Vital. Nivoitra tamin’izany ny tsy tokony hikitihana ny lalàmpanorenana amin’izao fotoana izao. Notanisainy koa ny olana mianjady amin’ny vahoaka malagasy, amin’izao fotoana izao.
“Manolo-kevitra am-panetren-tena ny Hiaraka isika : Avelao hataon’ny mpitondra vaovao lany ao aorian’ny fifidianana raha ilaina ny fanitsiana ny lalàmpanorenana… Efa miandry fatratra ny fifidianana amin’ ny taona 2018 sy ny manaraka eo ny vahoaka..”, hoy ny fanambarana. Nanteriny fa malalaka kokoa isika amin’ izany mandinika am-pahatoniana ny lesoka sy ny fanarenana ilaina. “Aoka tsy hadinointsika fa tsy azo ovana ny fe-potoana iasan’ny filohan’ ny Repoblika. Farito amin’ny fotoana mialoha ny andron’ ny fifidianana raha heverina ho tsy ampy ny fotoana. Ndao horaisintsika ho lesona ny fikorontanana rehetra tany amin’ireo firenen-kafa nikitika ny lalàmpanorenany mialoha ny hanatanterahana fifidianana efa voatondro. Omano sy tanteraho ny fifidianana”, hoy ny Hiaraka isika.
Notsiahivin’ny fanambarana fa maro tsy tambo isaina ireo olana mianjady amintsika mpiray firenena ary samy mitaky vahaolana maika sy tena izy ka rariny raha toa iarahana miatrika ny famahana izany. Nanterin’izy ireo fa mibahana sy mihanaka ny tsy fandriampahalemana. Mihamahantra ny vahoaka, tsy voajery ireo tanora. Tsy misy fepetra hanampiana ireo mpandraharaha malagasy ahafahan’izy ireo mampivelatra ny asany, hiatrehany ny mpifaninana avy any ivelany. “Lasa migalabona eto amin’ ny tsena anatin’ny firenena izy ireo ka mamono ireo orinasa madinika sy salasalany, mba manome asa ny tanora…”, hoy ihany ny Hiaraka isika.
Fanapahan-kevitra tsy matotra
Ankoatra izany, notanisain’izy ireo fa mandrimpaka ny Malagasy ny valan’ aretina samihafa : ambalavelona, pesta, raboka, tazomoka… “Maro ireo nidiran-doza noho ny fanantanterahana fanapahan-kevitra tsy matotra noraisin’ny mpitondra. Ohatra ny fanaovana vaksiny tany an-tsekoly ataon’ny olona tsy voaomana hanao izany, famoriana olona analina mba izarana fanekena fandraisana ho mpiasam-panjakana sady fandaniam-poana nefa indrisy namoizana aina”, hoy ny Hiaraka isika. Tsy mitsaha-miakatra ny vidim-piainana… Tsy voaloa ny tambin-karaman’ireo sefo fokontany, mpampianatra iantohan’ny ray aman-dreny. Zary lasa natao fitaovana politika. Hatrany amin’ny sampandraharaha ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika aza, tsy nandray karama aman-taony.